Ogaden News Agency (ONA) – Maxaysatadii Hawaarin oo u tafaxaytay boobka hantida dadweynaha
Maxaysatadii Hawaarin oo u tafaxaytay boobka hantida dadweynaha
Posted by ONA Admin	/ April 16, 2011
Wararka ka imanaya guudahaan deegaanada Ogadenya waxay isku raaceen in maxaysatadii uu Cabdi ilay soo ururiyay ay hadda hawl ka dhigteen boobka hantida dadweynaha iyo dilka qofkasta oo isku daya inuu xoolihiisa ka ilaahsado. Magaala madaxda Jigjiga waxay maxaysatadan ayaa hadda wax walba si boob ah uga qaata dadka shacabka ah. Maxaysatadan oo markii hore loo hubeeyay inay ka hortagaan naftood-hurayaasha CWXO ayaa markay ku soo halaagsameen goobihii la’isku farasaaray waxay hadda boob iyo dhac ula soo noqdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka oy ka mid tahay Jigjiga halkaasoo ay falal badan oo waxashnima ah ay ka sameeyeen sida ay soo wariyeen dad ka soo nqoday fasaxyo ay halkaa ku joogeen. Waxaa hadda caan ka noqotay Jigjiga inay ku yidhaahdaan qofkii kala hadla arimaha boobka ah inay ku yidhaahdaan – aabaheen Cabdi Cumar ayaa — ” taasoo qofka maqla uu horey uga sii dhaqaaqo si aanu budhka u saarin isagoo leh –aaba Cabdi ilay ayuu caayay-. Waxaa laga yaabaa in waxyaaba badan markaad maqasho ay kuula muuqdaan wax aan dhici karin, hasa ahaatee warbixinada ay soo warinayaan dadka fasaxyada ka soo noqda waxay si wadar ah u muujinayaan inay maxaysatada cabdi ilay noqdeen hadda jirri isbaarooyin dhigtay goobaha ganacsiga.
Arimahaa foosha xun ee dhaqanka iyo diintaba ku xun waxay keentay in odayaal farabadan ay wiilasha la duufsaday kula taliyaan inay ka tagaan dhaqan xumadan inta aanay naftooda ka waayin aakhiradoodana ku xumaanin. Dhalinyara badan ayaan hadda ka soo noqday, qaar badanna waxay ku biireen CWXO oo tababaro gaar ah u furay, taasoo salka ku haysa niyad jabka guud ee haysata askarta iyo maleeshiyaanka maamulada guumaysiga Itobiya.
Arimaha na soo gaaray waxaa ka mid ah in magaalada Sagag 20kii Feberaayo lagu shiriyay odayadii dagmada iyadoo shirka ay u qabteen wakiilka Cabdi iley u joogay halkaa oo lagu magacaabo Shaalaqe Dhaga-wayne oo haysta maleeshiyada Hawaarin qaybtooda joogta Sagag iyo ninkii markaa gudoomiye ka sii ahaa magaalada oo oy dadweynaha u yaqaanaan Khamriile Xayi-badhi.Xayi-badhi.
Waxay amar ku siiyeen odayadii dhaqanka ee degmada in inta ka horaysa 3exda galabnimo ay ku qasbanyihiin inay qabaa’iladii ay ka dhasheen maleeshiyaankii ka baxsaday Dabaqoodhigooda ka keenaaan lacag iyadoo qofkii baxsadayba loo xisaabin hayo 10,000 oo Birr tan oo ay ku macneeyeen in ay odayadu yihiin kuwii ka danbeeyay inay kala diraan kalana furfuraan maleeshiyada kililka. Waxaana loogu hanjabay qabiilkii keeni waaya ganaaxaas in la dhici doono wixii hanti ah ee ay magaalada ku lee yihiin oo laga uruurinayo cooshadaha wixii u yaala sida; shiidka, gor-goradaha, funaanadaha, shaadhadhka iyo dhamaan wixii laga helo cooshadaha yar-yar ee wali siiwitig witig layn haya.
Qaar kamida odayadii dagmada ayaa muujiyay inay si wayn uga soo horjeedaan arinkan iyagoo ku tilmaamay xadgudub iyo hantidii dadweynaha oo si sharcidarro ah lagu boobayo. Odayadaa ayaa loo gaystay jidh dil, waxaana ka mid ahaa; Xaaji Maxamad oo ay da’diisu aad u wayntahay, Aw Axmad Alaaki oo ku magac dheer (qoorgaab) oo isna dadiisu kor martay 70 sano.
Ciqaabta noocan ah ma aha kii ugu horeeyay ee ka dhaca dagmada Sagag ama guud ahaan deegaanka dalkaa ee waa dhaqanada gumaysiga iyo kuwa u adeegaya ay waayahan danbe la soo bexeen, taasoo ku dambayn doonta inuu shacabka iska celiyo maleesiyaadka Cabdi ilay oo hubka loo gurto.
Magac bay leeyihiin Marka lajoogo Ogaden waana ” Tigrey dhaadhaan” ama Hawaarin,